कोरोनाको कहरले मिलाएको दम्पति ! « Postpati – News For All
कीर्तिपुर शहरको एक कुनामा एउटा सानो परिवार बस्छ । सन्तानको शिक्षादीक्षाको खोजीमा हिडेको त्यो परिवार रोल्पाको बिकट गाउँबाट २०६८ सालमा सपनाको शहर राजधानी छिर्यो । एक छोरा र एक छोरीको वरदान पाएको त्यो जोडीले राजधानीको खाल्डोमा निकै संघर्ष गर्यो।
अनवरत संघर्ष पछी आत्मनिर्भर सानो बासस्थानको पनि जोहो गर्यो । जो अथाह संघर्षको परिणाम थियो।
केहि मिठा, अनि केहि तिता दिनहरुले स्पर्श गर्दै उपत्यकाको खाल्डोमा नवौं बर्षहरु बित्दै थिए । आमा र बाबाले सन्तानको लागि खोजेको शिक्षा निरन्तर पुरा हुँदै गयो।
भनिन्छ गरिवीको आँखीझ्यालबाट चियाएको सपना निकै बिशाल हुन्छ । बिकट त्यो गाउँबाट नजर अन्दाज गरेको त्यो जोडीको सपना साँच्चै बिशाल थियो।
जुन जोडीको परिवर्तित नाम हो नवराज क्षेत्री र सपना क्षेत्री ।
१५ बर्ष अघि मिलन भएका नवराज र सपना शहर पसेपछि एकरथका पाङ्ग्रा बनेर जिन्दगिको रथ हाँकी रहे । सघर्षका प्रत्यक पाइलाहरुमा दुवै जना एकअर्काका सहयात्री बने । उनीहरुलाई शहरले लखेट्न खोज्थ्यो, पाखे भनि हेंला गर्थ्यो तर उनीहरु अडिक रहे । अनवरत सन्तानको भबिस्य खोजिरहे ।
दुख र संघर्षले एकअर्का प्रति झनै गाढा प्रेम पलायो । नवराज सुनाउछन, पहिलो देखा भेटमै भागेर बिबाह भयो । त्यसअघि प्रेम गर्न पाएनौ ।
आखिर समयको खेल न हो । मानिसले देख्ने सपना असिमित हुन्छन । जति देख्दै र चुम्दै गयो, उति धेरै देख्न र चुम्न महत्वकांक्ष जाग्दो रहेछ र त्यही महत्वकांक्षले बिचारहरु बिच टकराव पैदा गर्दो रहेछ । मानिसहरुका चाहा जति बढ्दै गए, उति पारिवारिक वैमनस्यता बढ्दै जाँदो रहेछ । जति सुख हुँदै गयो उति धेरै सम्पन्नता खोज्दै जाँदो रहेछ । जति धन दौलत कमाउदै गयो उति धेरै कमाउने चाहा बढ्दो रहेछ ।
खासगरी सुबिधा र सुखले व्यक्तिगत महत्वकांक्षका घेराहरु तोड्ने इक्छाहरु जागृत हुँदा रहेछन, अनि इक्छा र चाहानाहरु असिमित हुँदै जाँदा मनहरु बाँझिदा रहेछन ।
यसरि त्यो जोडीमा बिस्तारै दुविधाहरु उत्पन्न हुँदै गयो । प्रेमको सानो नगरीमा यो जोडीले आफुले आफुलाई नियालेर हेरेन, बरु एकले अर्कालाई नियालेर चियो गर्न थाल्यो । जब मानिसले अरुको चियो गर्छ त्यहाँ अथाह समस्याको भण्डार देख्छ । त्यहाँ नैतिकता पनि धमिलो देखिन्छ । ब्यबहार र शैलीमा चटक देख्छ । तिब्र दम्भ, घमण्ड र महत्वकांक्ष भेट्छ ।
यस्ता ब्यबहार र आचरणहरु संकास्पद नजरले नजिर गर्दा आपसमा फरक दृष्टिकोण उत्पन्न भयो । यान्त्रिक बुझाईहरुले नियत दृष्टिबाट एकले अर्कोलाई हेर्ने र बुझ्ने चेष्टा हुन थाल्यो । अनि त्यसपछि अलिकति स्वतन्त्रता ! अलिकति उदारता ! अलिकति अधिकार ! अलिकति पुरुस्वत्व ! अलिकति लैंगिकता ! अलिकति नैतिकताका प्रश्नहरु तेर्सिए ! जुन प्रश्नहरुले उनीहरुको दुरीलाई टाढा-टाढा पुर्याउदै थियो ।
यी सबै नजरहरु एकले अर्कोलाई हेर्न अभ्यस्त भए तर त्यहि नजरले आफुलाई हेर्ने चेष्टासम्म भएन । सायद आफुले आफुलाई नजिर गर्न सकेको भए यी सबै समस्याका भण्डारहरु नामेट हुन्थे । सुन्दर हेराई जीवित रहन्थ्यो । संकाले लंका जलाउदैन्थ्यो ।
हुन त एउटा सामाजिक उखान छ, ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो’ हो । लोग्ने र स्वास्नी बिच हुने झगडा एकैछिन साम्य हुन्छ । घर ब्यबहारमा हुने सामान्य कलह क्षण भरमै प्रेममा बदलिन्छन ।
यो लोकमा समस्या रहित मानिसहरु कोही हुँदैन । नयाँ सम्भाबनाहरुसँग खेल्ने मानिस जातिसंग समस्या आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । जुन समस्याले सम्भावना चुमिरहेका हुन्छन ।
यस्तै गतिशील जिबन्त प्रक्रिया नबुझ्दा धेरै जोडीहरु टुटेका छन् । पछिल्लो चरण नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको समस्या निकै बढेको छ । जसको सबै भन्दा प्रभाव बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको बढी देखिन्छ । समस्याको अन्तिम बिकल्प सम्बन्ध बिच्छेद देख्नेहरु जिबनको साइनोलाई टुटाई छोड्छन् ।
यसरि नबराज र सपना बिच गतबर्ष देखि यस्तै टाक्क टुक्क बिच एकअर्काका मनहरु अलि धेरै पुर्वाहग्रही बन्दै गए । जतिबेला एकले अर्कोलाइ बुझ्ने प्रयास शुन्य रह्यो र आआफ्नै आडम्बका कारण तिन महिना अघि छुट्टा-छुट्टै बस्ने निधो गरे ।
जति बेला प्रेम नगरीको एउटा बिशाल सपना टुट्दै थियो । चेत खुल्न थालेका दुई सन्तानको मानसपटलमा बिछोडको क्षणले बालाहृदय दुखायो।
आमा र बाबा आ-आफ्नै जबमा ब्यस्थ भए । एकले अर्कालाई हेर्न र सुन्न नसक्ने भए । उनीहरु आ-आफ्नै स्वामित्वमा बाँच्न चाहान्थे तर छोरा र छोरीले बाबा र आमा संगै भएको र दुवै जनाको न्यानो काखमा खेल्न र हुर्किन चाहान्थे ।
तर छोरा र छोरीले आफ्ना आमा र बाबाबाट एउटा सम्मान गुण पाए । छोरा छोरीले आमा बाबालाई भेट्न दुवै जनाबाट कुनै रोकतोक भने भएन।
सम्बन्ध बिच्छेदको अन्तिम संघारसम्म पुगे । न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाए । जान्ने सुन्ने पन्च प्रधानलाई समेत पुकारे । जतिबेला कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रियो ।
विश्व जगतले कोरोनाको कहर भोग्न थाल्यो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । सरकारले कोरोना बिरुद्द लड्न लकडाउन लागु गर्यो । मानिसहरु घरभित्रै लक भए । संसारमा कोरोना भाइरस सामु सम्पन्नशाली राष्ट्रहरु निरिह बन्दै गए । पैसाले सबथोकको निराकरण गर्छ भन्ने सोंचहरु फेल भए । धनसम्पत्तिका लागि विदेश पस्नेहरु घरफर्किन थाले ।
कोरोनाको कहरले तबाह मच्चाई रहेको बेला, हिजो आगो बनेर टुट्न थालेका मनहरु शिथिल भए । नबराज र सपनाको आत्माले समिक्षा गर्यो र जिन्दगी दूई दिनको न हो । एकलै बाँच्नुको के अर्थ । छोराछोरीको हृदय रुवाएर बाँच्नुको के सार्थक । यस्तै यस्तै सकारात्मक सोंचहरुले आफैलाई हेरेर समिक्षा गर्न थालेपछि दुवै जना नयाँ साल २०७७ को पहिलो दिन मिलन भए ।
सायद दुवैजना काममा व्यस्त हुन्थे भने जिन्दगीको कथा र सन्तानको भबिस्यलाई नियाल्ने मौका मिल्दैनथ्यो । लकडाउनले व्यस्त मानिसहरुलाई परिवारसंग घुलमिल हुने वातावरण दियो, फलस्वरूप जिबनलाई फर्केर हेर्ने अवसर पाए ।
मिलन हुँदाको दिन सपनाले नबराजलाई एक गिलास पानी टक्र्याइन । जतिबेला नबराजका आँखाबाट आँशु तप्प खस्यो । सायद उनले बिगतलाई सम्झिए, एक्लो हुँदाको पिडालाई स्मरण गरे । सपनाले आँसु पुछिदीईन र अँगालोले कसिन । नजिकै उभिएर नियाली रहेका छोरी र छोराले हर्षको आँशु खसाल्दै, दौडेर आए अनि बाबा र आमालाई केहीबेर अंगालोमा बाँधी रहे ।
यसरि तिन महिना अघि बिछोडिएका आमा-बाबाको जिबनको मिलन भयो । बिशाल सपनाहरु जीवित रहे । संगै ज्युने र संगै मर्ने अठोट लिए ।
नबराजले सम्झिएको जिन्दगीको एउटा मिठो कथा छ । सपनासंग भेटभएको पहिलो दिनमै भागि बिबाह भयो, यदि त्यो दिन बिबाह हुँदैनथ्यो त, तिन दिनपछि सपनाको मागी बिबाह हुँदै थियो । यसरी बाल-बालमा मिलन भएको यो जोडी १५ बर्ष पछी पनि झन्डै बिछोडको संघारमा पुग्यो तर बाल-बालमा बच्यो । मिलनको एकपलले जिन्दगीभरी बाँधोस यहि शुभकामना छ ।
यो जोडीले मिलनको श्रेय कोरोनाको कहरलाई दिए, ‘कोरोना तिमीलाई धन्य छ भन्न सकिदैन, तिमीले दिएको ‘कहर’लाई धन्य छ, तर अब तिमि यो देशबाट टाढै होईजाउ, बिछोड हुनेको मिलन भैसक्यो ।’